यौ’नशक्ति बढाउने घरेलु ५ उपाय ! – Sandesh Munch
May 12, 2020 466
तपाईको यौ’न जीवनमा धेरै स’मस्याहरु हुन सक्छन् । हामीले स’मस्याहरु त्यसै लु’काएर बस्नुभन्दा पनि तीनको समाधान खोज्नु पर्छ । नियमित यौ’न क्रि’याकलापमा सामेल व्यक्ति र सामेल हुन नपाएको व्यक्तिबीचको व्यवहारमा निकै फरक हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ से’क्स स्वास्थ्यको दर्पण हो ।
यौं’न श’क्ति बढाउनका लागि तपाईले विभिन्न खालको औषधी उपचार गराउदा स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
त्यसैले घरेलु उपाय अपानाउदा स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव पार्छ ।
दुई चम्चा अमलाको रसमा एक चम्चा सुकेको अमलाको चूर्ण र एक चम्चा शुद्ध मह मिलाएर दिनमा दुई चोटि सेवन गर्नुपर्छ । यौ’न श’क्ति बढाउँछ ।
दूधमा अश्वगन्धाको चूर्ण आधा चम्चा हालेर बिहान र बेलुकी खाने गर्नुपर्छ । यसले यौ’न शक्ति बढाउनुका साथै शी’घ्रपत’नको स’मस्याबाट पनि छुटकारा दिलाउँछ ।
आधा चम्चा प्याजको रस, आधा चम्चा मह र आधा चम्चा मिस्री मिलाएर बिहान र बेलुका खाने गर्लाले यौ’न क्ष’मता वृद्धि हुन्छ ।
तुलसीको बीउको चूर्ण दूधमा हालेर बिहान बेलुका नियमित खाने गर्नाले यौ’न दु’र्बलता हट्छ । तुलसीलाई प्राचिनकालदेखि यौ’नवद्र्धक वनस्पति मानिएको छ ।
पीपलको फल र पीपलको जरालाई कुटेर मिश्रण बनाउनुहोस् । यो दुई चम्चा म्रिश्रणलाई सय मिली दूधमा हालेर उमाल्नुहोस् । यसलाई छानेर आधा गिलास बिहान र बेलुका खाने गर्नाले यौ’न शत्तिमा वृद्धि हुन्छ ।
नियमित याै’नस’म्बन्ध नराख्दा देखिनसक्ने समस्याहरु
तपाईले नियमित रुपमा यौ’न स’म्पर्क गर्ने गर्नुभएको छैन् ? भने तपाईलाई विभिन्न खालका सम’स्याहरु देखिन सक्छन् । किनभने से’क्स गर्दा एडोर्फीन ह’र्मोन अर्थात आनन्द दिने ह’र्मोन निस्कासन हुन्छ जो त’नावलाई नियन्त्रण गर्न मद्धत गर्छ ।
अध्ययनको अनुसार जो व्यक्ति सातामा कम्तीमा दुई पटक से’क्स गर्छ उसमा इरेक्टाईल डिस्फङसन (यौ’न दु’र्वलता) त्यति हुँदैन जति सेक्स नगर्ने व्यक्तिमा हुन्छ । किनभने से’क्स पटक पटक गर्दा पेनाइल मसल्सको मजबुत हुन्छ ।
‘आर्काइव्स से’क्चुअल विहेवियर’को जर्नलमा प्रकाशित अध्ययन अनुसार मेलाटोलिन, सेरोटोनीन र अक्सिटोसिन जस्ता ह’र्मोनहरु पुरुषको बी’र्यमा रहन्छ जो से’क्स गर्दा महिलामा पुग्छ र महिलाको मु’ड बनाउन मद्धत गर्छ ।
बढने स्व्यस्त तालिकाका कारण यदि कुनै जोडिले से’क्सका लागि समय निकाल्न पाएनन भने महिला वा पुरुष दुवैमा एक खालको रि’स पैदा हुन्छ । र यसले दुईबीच दरा’र पैदा हुनसक्छ ।
रो’ग प्रतिरोधी क्षमता क’मजोर:
अध्ययनहरुबाट थाह भएको छ कि सातामा कम्तिमा दुईपटक से’क्स ग’र्दा उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहन्छ ।
स्याउले बढाउँछ महि’लाको से’क्स पावर
अ एप्पल अ डे, कीप्स डाक्टर अवे’ अर्थात प्रतिदिन एउटा स्याउ सेवन गरे तन्दुरुस्त रहन पुग्ने विश्वास गरिन्छ । यो भनाइ तपाईले पनि सुन्नु भएकै होला । एउटा ताजा सर्भेका अनुसार स्याउ सेवनबाट महिलाको का’मुकता बढ्ने गर्दछ ।
अध्ययनका अनुसार दैनिक स्याउ खाँदा स्वस्थ महिलाको यौ’न ‘क्ष’मता बढ्छ । स्याउमा पोलिफेनाल्स र एन्टीआक्सिडेन्ट हुने गर्दछ । जसले यौ’नअं’गमा र’क्तप्रवाह बढाउन सहयोग गर्दछ । यसबाट महिलामा का’मोत्तेजना थप बढाउने गर्दछ ।
शोधकर्ताहरुले इटालीमा १८ देखि ४३ वर्ष उमेर समूहका ७३१ जना स्वस्थ महिलामा अध्ययन गरेका थिए । अध्ययनमा महिलाहरुले ‘महिला यौ’न क्ष’मता सूचकांक’ भरे, जसमा यौ’न फंक्शन, से’क्स्युअल फ्रिक्वेन्सी, स’म्भोग, ल्युब्रिकेशन र यौ’न स’न्तुष्टिका बारेमा प्रश्न सोधिएको थियो ।शोधकर्ताहरुले पाए कि जुन महिलाले हरेक दिन एक वा दुई स्याउ खाने गरेका थिए, उनीहरुको ल्युब्रिकेशन र ओभर अल से’क्स्युअल फंक्शन बढी उत्तम थियो ।
स्याउमा फ्लोराजिन पनि हुने गर्दछ जुन एउटा आम फिस्टेस्ट्रोजेन हो । यो संरचनात्मक रुपबाट एस्ट्राडियोलजस्तै हुने गर्दछ । एस्ट्राडियोल महिला से’क्स ह’र्मोन हो जसले कामु’कता बढाउन सहयोग गर्छ ।
Prevमध्यरातमा घाँटी छिनालेर हत्या, टाउको नै छैन घटनास्थलमा
Nextमध्यरातमा खुकुरीले हानेर श्रीमतीको हत्या
एकाबिहानै गण्डकी प्रदेशमा थप ५८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या ४३८ पुग्यो
सिमानामा भारतीयको समूहबाट कुटिएका रामदेवको मृ त्यु
घरमै बसी मनग्य पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ ? यी २० काम गर्नुहोस्